Wararka - Tayada badeecada adag ee Lida caaga ah si ay u gaarto Heerka Sare ee Caalamiga ah ama Dibadda
Lida Plastic Rigid PVC sheet sheet ayaa la baaray oo ay xaqiijiyeen waaxyo ay quseyso, ilaa qodobada Gobolka Hebei si ay u qaataan tallaabooyinka hirgelinta maareynta heerka caalamiga ah, waxay ku guuleysteen kormeerka suuqa Gobolka Hebei iyo maamulka ay soo saartay “qaadashada shahaado aqoonsi heer caalami ah” . Shahaadadu waxay tilmaamaysaa in tayada alaabtayada ay gaartay heer caalami ama heer sare oo shisheeye.
Guddigeenna Waraaqda PVC waxaa laga sameeyay kuleeliyaha aadka u badan. Waxay leedahay iska caabin kiimikaad wanaagsan iyo cadaadis-dillaac, dahaadhka dhawaaqa, dahaarka kulaylka iyo nuugista buuqa iyo ilaalinta kulaylka iyo ka-hortagga daxalka. Gudiga xaashida ee PVC wuxuu bixiyaa adkaysi aad u fiican iyo iska caabin saamayn wanaagsan leh. Waxaa lagu farsameeyay qaaciddada u adkaysta cimilada, badeecadani waa qoyaan iyo caaryo u adkaysta maxaa yeelay ma nuugto biyaha. Waraaqaha PVC waa raagayaan oo midabkiisa si fiican ayay u hayaan sanadba sanadka ka dambeeya. Waxaa intaa dheer, culeyskeeda fudud wuxuu sahlaa kaydinta iyo gaadiidka.
Chloride -ka Polyvinyl (PVC) waa mid ka mid ah kuwa ugu kululaynta kuleylka ee maanta la isticmaalo. Waxaa aad loogu isticmaalaa dhammaan warshadaha laga bilaabo baakadaha cuntada, ilaa dhismaha guriga. Saamigeeda xoogga-ilaa-miisaanka iyo iska-caabbinta ololka ka sarreeya, oo ay weheliso qiimaheeda hoose, ayaa ka dhigaysa maaddada xulashada codsiyada ugu baahida badan.
Heerkulka adeegga ugu sarreeya ee PVC waa 140 ° F (60 ° C). Astaamaha jireed ee PVC si fudud ayaa loo beddeli karaa iyadoo lagu darayo balaastikada, wax -ka -beddelka wax -ka -beddelka iyo maaddooyinka kale si loo horumariyo loona horumariyo guryaha gaarka ah. PVC -ga adag ayaa ah walxo u adkaysta daxalka oo leh astaamo saamayn caadi ah waxaana loo adeegsadaa halka weerarka kiimikada uu yahay walaaca ugu weyn.